Laptop တစ်လုံးရောင်းမည်။ - MYSTERY ZILLION
August 2009 edited September 2009 in Laptops & Notebooks Sale
အမျိုးအစား - Compaq
Model - Presario C700
Part No. - KB154PA#AKL
C.P.U - Intel Pentium(R) Dual CPU T2330 @1.6GHz
Motherboard - Hewlett-Packard 30D9 (83.21)
Memory - 1 GB DDR II (266 MHz)
Graphic - Mobile Intel 965 Express Chipset Family
Windows - Windows7Ultimate (activated)
Add; - Original Laptop Carry Bag (HP)
ညှိနှိုင်းစျေးဖြင့်ရောင်းပါမည်။ စိတ်ပါ၀င်စားသူများ [email protected] သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
(မှတ်ချက် ။ ။ တစ်ပါတ်အတွင်းသာ)
အင်း စျေးကွက်ကလည်း လန်းချက်........ ခုထိ မထူးသေးဘူး.......... :d
၀င်းဒိုးဆဲဗင်း os ဆို၀ယ်ဘူး :d:39:
ကိုယောင် ကသူ့ ဆီကို တစ်ရာသီစာ အငှားချပါလားတဲ့ ကိုစိုင်း ... သူ့လက်တော့ ပြည်တော် ပြန်လာရင် ပြန်ပေးမယ်တဲ့... တစ်ရာသီစာ အငှားဆိုဖြစ်မလား.... :d:d:d
အန်..... ဘောလုံးသမားများ မှတ်နေသလားမသိ....... ဟီဟိ.......
တရာသီငှားမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားတယ်။ performance ကျနေရင်တော့ မရဘူးနော်။ ငှားကြေးအနေနဲ့ ဘီဘီတိုက်မယ်လေ။ ဘယ်လိုလဲ သဘောတူရင်စာချုပ်ချုပ်ကြမယ်။ သေချာရင် မီဒီယာကို ဖွင့်ချလိုက်တော့မယ်။ :d:p
ဒါမှာမဟုတ် parts တွေကို တစ်ခုချင်းစီဖြုတ်ရောင်းပါလား
ပြန်ထ တိုင်း လဲကျတာ သဘာ၀ပဲ............
ဆြာကီး သောက်တာများသွားလို့နေမှာပေါ့ :P
လူစိတ်ဝင်စားအောင် ပိသာချိန်နဲ့ရောင်းပါလား :d
ဒါမှာမဟုတ် parts တွေကို တစ်ခုချင်းစီဖြုတ်ရောင်းပါလား :d
လာထား ပိသာချိန်နဲ့ ရောင်းမယ်..... တစ်ပိသာ ကို သိန်းတစ်ရာ...... :d
ကျနော် မှာသိန်းထားတဲ့၂၀၀ ရှိတယ် ကိုစိုင်း:d:d:d
အနော် လဲ ရောင်းမယ်.....Fujitsu ,NEC, Sony VAIO,Toshiba Dynabook ,HP,Dell စျေးနူန်း -၁ သိန်း ၅၀၀၀၀ ကျပ်
လက်လီလက်ကား ရ မည်။
ဆက်သွယ်ရန်- ဖုန်း-၀၉၀ ၆၅၄၄ ၄၉၁၄
စျေးကွက် ဆို တာ ဒီလိုကြော်ငြာလို့မရပါ။ :68::68::68: အသေးစိတ်ပြောမှာ ၀ယ်တဲ့သူ ကစိတ်၀င်စားမှာပေါ...
ကျွန်တော်လည်းစိတ်၀င်စားတယ်။ Dell လေး ပြောပြပါ။
ဟုတ်တယ်........ ကျွန်တော်လည်း စိတ်၀င်စားတယ်............ ဒါပေမယ့် ၁ သိန်း ၅၀၀၀၀ ကျပ် ဆိုတာကြီးကို မရှင်းဘူး တစ်သိန်းငါးသောင်းလား၊ တစ်သိန်း တန်တွေ ငါးသောင်းတန်တွေလား...... အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးလေ......
အစ်ကို ဖုန်းနံပါတ် က ဘယ်နိုင်ငံလဲခင်ဗျား။ ကျွန်တော်မသိလို့ပါ။ နံပါတ်် ၁၁ လုံးဆိုတော့....:39:
၁သိန်း ၅၀၀၀၀ ကျပ်ဆိုတာ
Admin တွေ မော်မော်တွေ member တွေပဲ စျေးဖြတ်ပေးဗျာ။
HDD 30 Gbs
battery duration - CD Run ရင် အခွေထုတ်ချိန်တောင်မရ။ ဒီအတိုင်းဆို ၅ မိနစ်:D
စျေးလေးလဲ ဖြတ်ပေး။ ရောင်းလဲ ရောင်းချင်တယ်ဗျာ
ဒီ thread မှာပဲ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်မယ်
စျေးတည့်ရင် အိမ်မှာ ပစ္စည်းလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
used လားဗျ။အကို သုံးနေတဲ့ဟာလား။နောက် ပုံလေးပါတင်ပေးရင် အဆင်ပြေတယ်ဗျ။
(မှတ်ချက်။ ။ပုံဆိုတာCompaq Site ကနေရှာတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးနော်။အကိုရောင်းမဲ့ Laptop ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ခိုင်းတာပါ:6:)
စျေးဖြတ်ပေးပါဆို။ mz ကလူတွေကို ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းက လူတွေထပ်ယုံလို့ ပြောတာနော်။ ဟွန်း
စျေးဖြတ်ပေးပါဆို။ mz ကလူတွေကို ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းက လူတွေထက််ယုံလို့ ပြောတာနော်။ ဟွန်း
ကျွန်တော်သာဆို ဘက်ထရီသုံးမရတဲ့ လက်ပ်တော့ပ်ကို တစ်ပြားမှမပေးဘူးဗျ.. ဟီး အမှန်အတိုင်းပြောတာ.. မီးနဲ့မှ သုံးလို့ရမှတော့ အိမ်မှာပဲသုံးတော့မယ်.. external hdd ဆောင်သွားမယ်.. ဒါပဲ.. :P
မောလ်ဒယ်အောက် laptop ဆိုကိုင်ချင်ပါဘူးဂျာ :68:။ ၁ပတ်အတွင်းရောင်းမစွံရင် နောက်၁ပတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ။ အနော်က core3trio ပဲစိတ်၀င်စားတာဂျ ။ အခုတောင်ကြိုမှာထားတယ် ယူမယ့်သူစာရင်းပေးကြနော် . . . . . . :65:
ကျနော့် အမျိုးထဲကညီငယ်လေး ၁ ယောက်ကလဲ LAPTOP ၁လုံးရောင်းချင်ပါသတဲ့
စိတ်၀င်စားတဲ့လူများ နေသောကြောင့် လေလံဆွဲရမည်ဖြစ်ပါသည်.(အမှန်တော့ စိတ်၀င်စားမဲ့သူ၁ ယောက်မှမရှိဘူး ) ကြမ်းခင်းစျေးနဲ့ သူ့အမျိုးအစား ကိုဖေါ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်..
VGA က 256
CPU က ၂.၀ GHZ
ကျွန်တော့် Laptop ကမော်ဒယ်အောက်တယ်ဆိုတော့ အကိုက ဘာအမျိုးအစားများသုံးနေပါသလဲ......? တစ်ဆိတ် ပြန်ဖြေထားပေးပါ.......
ဟဲဟဲ ရင်လောက်မှန်းမှ ဒူးလောက်ကျန်သတဲ့ ။ အကိုကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား ။ ကျွန်တော်ကသူများသုံးနေတာထက်ပိုပြီးမှန်းတတ်တယ်လေ ။ ဒါပေမယ့် ၀ယ်ဖို့ကျတော့အဟဲ
ပိုက်ပိုက်မရှိသေးဘူးလေ ။ ဒါကြောင့်မထွက်သေးတာကိုပဲ မှန်းမျှော်ပြီး စိတ်ဖြေသိမ့်နေရပါတယ် ။
စိတ်ဆိုးနဲ့နော် :77: တွေ့ပုချီ ။ :38: :38: :38: :38: :38: ။ သွားရည်တော့ကျတယ် ။ ဒါပေမယ့်